यी युवतीलाई टिकटकले नै बनायो धनी, राखिन् बडीगार्ड ( भिडियो सहित ) —
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा राखेको भिडियो का कारण एक युवती चर्चामा छिन् । टिकट कमा उनको १.६ करोड फ्यान छन् । टिकटकका कारण उनी चर्चामा छिन् भने आर्थिक रूपमा पनि धनी छिन् । त्यसै कारण उनले अहिले आफ्नो सुरक्षाका लागि अङ्गरक्षक समेत राखेकी छन् । उनकी आमाले समेत छोरीका कारण जागिर छाडेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल युवती ब्रिटेनकी हुन् । उनको नाम होली हर्न भएको डेली मेलले उल्लेख गरेको छ । भिडियो हेर्नुहोस्
यो पनी हेर्नुहोसः अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी’हरुले काम पाउन छाडे ( कारण यस्तो )
अस्ट्रेलिया । पछिल्लो केही समय यता अष्ट्रेलिया’मा आफ्नो क्षमता तथा दक्षता अनुसार’को काम पाउन क’ठि’न हुँदै गएको छ । एक अध्यायन’का अनुसार टेम्पो’ररी ग्राजुएट (४८५ भिसा) पाउने नेपाली लगायत’का अन्य देशका विद्यार्थी’हरुले आफ्नो क्षमता अनुसार’को काम पाउन छोडेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी’हरुको संख्या बढ्दै जाँदा उनीह’रुले आफ्नो क्षमता अनुसार’को काम पाउन छाडेका हुन् । क्षमता अनुसार’को काम पाउन छाडे’पछि नेपलाी लगायत अन्य देशका विद्यार्थी’हरुले सर–सफाइ, लन्ड्री, सेल्स लगायतका काम भए पनि गर्न थालेका छन् । आफ्नो अध्यायन’पछि सम्बन्धित विषय’भन्दा बाहेकका काम’हरुमा उनीहरु लागेको अध्यायन’ले देखाएको छ ।
तर, आफूले पढेकै विषयसँग सम्बन्धित काम भने नपाएको विद्यार्थीहरुको भनाई छ । ४८५ भिसा पाउनेमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा पनि कमले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।विदेशी विद्यार्थी मात्रै होइन अष्ट्रेलियामा स्थानीय विद्यार्थीहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाइरहेका छैनन् । सोही कारण विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि अवस्था अझै कठिन रहेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । साभार : नेपालि पत्र
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियामा ‘फि’सि’ङ’ गर्न जाँदा ज्यानै जाला है ! अस्ट्रेलिया । गर्मी समय सुरु भएसँगै अष्ट्रेलियामा ‘फि’सि’ङ’ अर्थात् माछा मा’र्ने क्रममा केही व्यक्ति’हरु’ले ज्यान गु’माउँदै आएका छन् । ज्या’न गुमाउने’हरु’मा नेपाली’हरु पनि पर्ने गरेको ति’तो यथा’र्थ हामी माझ छ ।गर्मी महिनामा माछा मा’र्ने क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या अपे’क्षित रुपले न’घटेको कारणले गर्दा यस’बारेमा नेपाली समु’दायले सचेतना अभि’यान पनि चला’एका छन् । विशेष गरेर अष्ट्रेलियामा आएका नयाँ नेपाली विद्यार्थी अथवा अन्य प्रयोजन’ले आएका’हरुलाई यस्तो सचेतना अभियान चलाइएको छ ।
समुन्द्रमा ढुङ्गामा बसेर माछा मा’र्ने संस्कृति लोक’प्रिय भए पनि समुन्द्रमा अपनाउनु’पर्ने सावधानीको बेवास्ता गर्दा ज्यान गुमा’उनेको संख्या घटेको छैन । ढुङ्गामा बस्दा वा छेउमा बसेर फि’सि’ङ गर्दा समुन्द्रको छालले मानिसलाई अनियन्त्रित बनाउने गरेको छ । छाललाई सामान्य रुपमा लिँदा पनि कयौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यसै कुरालाई ध्यानमा दिँदै नेपाली समुदायले फि’सि’ङमा जाने हो भने ‘लाइफ ज्याकेट’ लगाउने, छाललाई खेलाचीको रुपमा नलिने, ठूलो छालबाट टाढै बस्ने, एक्लै समुन्द्रमा नजाने, जानै मन लागे समूह बनाएर जाने, पौडन सक्ने क्षमताको विकास गरेर मात्रै जाने सल्लाह दिएका छन् ।नेपाली तथा अन्य देशका आ’प्रवासीहरुले समुन्द्रमा ज्यान गुमाएपछि अष्ट्रेलिय’का सरकारी अधिकारी’हरुले पनि यसबारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । अष्ट्रेलिया सरकारले डुबेर म’र्नेहरुको बारेमा प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार करिब १० प्रतिशतको संख्या चीन, भारत तथा नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरु रहेको जनाएको छ । – साभार नेपालि पत्र
यो पनि पढ्नुहोस ! अस्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थलमा मा’सु बोकेर पुगेकी महिलाको भिसा र’द्द…
सिड्नी । अस्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थलमा मा’सु बोकेर पुगेकी एक महिलाको भिसा र’द्द भएको छ । अक्टोबरको दोस्रो साता मा’सुसहित अन्य खाद्यान्न बोकेर सिड्नी पुगेकी एक भियतनामी महिलाको भिसा र’द्द भएको हो । भिसा र’द्द भएपछि उनलाई सिड्नीको अध्यागमनले आफ्नो देश फिर्ता समेत गरेको थियो ।
४५ वर्षीय भियतनामी महिला १० किलो स्क्विड, बट्ट्याईं र करिब साढे ४ किलो सुँगुरको मा’सु तथा केही अण्डा लिएर सिड्नी पुगेकी थिइन् । सिड्नीमै बस्दै आएकी महिलाले आफूले ल्याएको समानको बारेमा जानकारी नै नगराउँदा उनको भिसा र’द्द भएको हो । अस्ट्रेलियाको सङ्घीय कृषि मन्त्री ब्रिजेट मकेञ्जीले यस कुराको खुलासा गरेकी हुन् । कृषि मन्त्रालयले स्वाइन फि’भर फै’लाउन सक्ने भन्दै उनको सामान जफत गरेर आफ्नै देश फर्काएको हो ।
उनले ल्याएको सुँगुरको मा’सुले फिबर ल्याउन सक्ने आकलन गर्दै अध्यागमनका कर्मचारीले उक्त निर्णय लिएको मन्त्री मकेञ्जीले बताएकी थिइन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा मन्त्रालय यस्तो कुरामा थप कडाइ गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले यस्तो खानेकुरा आफ्नो नबोक्न समेत भनेको छ । यस्तो खानेकुरामाथि जैविक सुरक्षा सम्बन्धी का’नुन लाग्ने व्यवस्था अस्ट्रेलियामा छ ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी’हरुले काम पाउन छाडे ( कारण यस्तो )
काठमाण्डौ/ चर्चित बाल गायिका कमला घिमिरेको तेस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ। ‘वान टु वान टु’ बोलको...
यस्तो छ रवि लामिछानेले सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्यक्रमको प्रोमो (भिडियो सहित)
काठमाडौँ / चर्चित सञ्चार कर्मी न्युज २४ बाट प्रसारित “सिधा कुरा जनता सँग” कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि...
चाइनिज युवती’को नेपाली युवक संग यस्तो प्रेम : भन्छिन मेरो देश छोड्छु तर नेपाल छोडदिन ( भिडियो
काठमान्डौ : चाइनिज युवती’को नेपाली युवक संग यस्तो प्रेम : भन्छिन मेरो देश छोड्छु तर नेपाल...